Vonjeo ny $ 1000 amin'ny rindran-kaonty 5.65 Smooth afa-tsy $ 999 - Fialana amin'ny fitafy
Home » Treadmills » malama » Save $ 1000 amin'ny rindranasa 5.65 Smooth afa-tsy $ 999
Save $ 1000 amin'ny rindranasa 5.65 Smooth afa-tsy $ 999
Tendrombohitra feno 5.65
Fitness Rebates dia mitondra ho anao ny varotra Treadmill 2013 avy amin'ny Smooth Fitness
Mitsitsia $ 1000 amin'ny Treadmill milamina 5.65
Ny vidin'ny fivarotana mahazatra dia $ 1999… miaraka amin'ity varotra ity dia $ 999 ihany no aloanao !!!
Raha ambany ny vola dia misy safidy fandoavam-bola isam-bolana $ 39 / volana
Momba ny Tendrombohitra Smooth 5.65:
Ny Smooth 5.65 dia fitaovana mahomby sy mahazatra mora ampiasaina miaraka amin'ny 2 mahazatra mora mihodinkodina mba hanampy anao hamonjy ny toerana sy hahamaina azy mora foana. Miaraka amin'ny fitaovana fampiasan'ny fiaramanidina Smack 5.65 ianao dia afaka manindrona ny kitapo fitondra amin'ny toerany ary manaloka izany ho an'ny tahirin-tsakafo.
Ny Smooth 5.65 dia manana rafi-peo SmoothSound ™. Azonao atao ny manantona ny iPod / MP3-nao amin'ny jack jack aide ary manampy ny mozika ankafizinao amin'ny alàlan'ny mpandahateny treadmill
Misy efijery LED 3 varavarankely misy LCD Dot Matrix. Ity fampisehoana ity dia mampiseho ny ora, ny halavirana, ny hafainganam-pandeha, ny fironana, ny tahan'ny fo, ary ny kaloria
The Smooth 5.65 manana motera herin-tsoavaly mitohy 2.75 izay manangana mandritra ny androm-piainana. Izy io dia manana tabilao mandroso Pulse Width Modulation (PWM) izay hita matetika eo amin'ny treadmills ara-barotra. Ny motera 5.65 dia miasa tsy misy tabataba
Ity treadmill ity dia misy programa fampiofanana 14 hafa:
- Fandaharam-pianarana 1
- Fandaharana haingam-pandeha / fironana 12
- Fandaharana tavy 1.
Ity fitoeran-tongotra malama ity dia manana mpihazona tavoahangy rano 2 sy rakotra famakiana miisa iray izay tsara ho an'ny boky na koa amin'ny fitaovana iPad na Kindle-nao. Misy fananganana mpankafy ihany koa izay hanampy anao hampihena anao mandritra ny fampihetseham-batanao.
Ny Smooth 5.65 dia manana fiantohana tranainy miavaka - Fiantohana mandritra ny androm-piainana amin'ny rafitra ianao, 5 taona amin'ny ampahany, ary 2 taona amin'ny asa.
Hividy ny Rindran-totozy 5.65 marevaka Androany avy amin'ny Smooth Fitness !!
Fanampiana matevina hafa koa azo atao mba hividianana Amazon amin'ny alalan'ny fandefasana maimaim-poana:
* Ny vidin'ny $ 999 ho an'ny rindran-damba 5.65 Smooth dia misy valiny amin'ny 10 / 17 / 13 1: 15 AM Ny vidiny dia marina araka ny ora / daty voatondro ary azo ovaina
Oktobra 17, 2013 FitnessRebates malama, Smooth Fitness, Treadmills Tsy asian-teny	565 malefaka, Fiatrehana fitaratra 5.65, fitondran-tena malemy 565, Fiatrehana fitaratra 565, smoothfitness 5.65 hazakazaka
Mividy Celltech 1lb 6 & Makà valisa Neurocore 45ct MAIMAIMPOANA hatramin'ny 10/31/13
24 Hour Fitness $ 9.99 Fanombohana ny fandoavam-bola isam-bolana Misaona 9 / 30 / 14